mushaTHE WORLDASIA98 IranChitima Tsaona muIran, 4 Vakafa 35 Vakakuvadzwa
Chitima Tsaona muIran, 4 Vakafa 35 Vakakuvadzwa
chitima chakakuvara mu ireland
Chitima cheEzhedan-Tehran cheIran chinofamba. Anenge 4 vanhu vakaurayiwa uye vanhu ve35 vakakuvara mutsaona.
Iran neSistan ne Balochistan mudunhu reZahedan neBaşknet Tehran nendege pakati pechitima chevakakwira chakadonha. Maererano nemishumo yekutanga, vanhu ve4 vakaurayiwa uye vanhu ve35 vakakuvara mutsaona iyi.
General Director weDunhu Callen Desk Abdulrahman Sehnvazi akataura kuti chitima locomotive chakadzika nekuda kwekuwanda kwejecha panjanji. Şehnvazi akasimbisa huwandu hwevakafa uye vakakuvadzwa ndokutumira zvikwata zvekubatsira, maherikoputa uye maamburenzi kudunhu. Iranian Emergency Aid Agency yakati mamiriro ezvinhu evakakuvara anorema uye nhamba yekufa inogona kuwedzera.
Ongororo yakatangwa pamusoro pengozi.
Dzidzira njodzi muGermany: 3 yakafa, 13 yakakuvara 15 / 04 / 2012 3 vanhu vakaurayiwa mugwagwa rechitima pedyo neguta reOnsenbach muGermany nhasi mushure mepakati peusiku. Ichitima, chakabva kuFrankfurt kusvika kuHanu, chakaita kuti mupfuri wezvitima aende mumigwagwa yechitima muOnenbach Mühlheim. Muchiitiko ichi, vanhu vaviri vakaurayiwa muchitima uye bulldozer. Offenbach kuchengetedzwa kwakashuma kuti 13 yakatorwa kuchipatara. Paaifungisisa njodzi yacho, yakadzidziswa kuti zvidzidzo zvepakona zvakaitika. Zvose zvevashambadzi ve6 vakawanikwa pachitima pakati paFrankfurt naHanu. Mhedziso: Nguva
Dzidzira njodzi muArgentina, 3 yakafa vakafa 100 yakakuvara 14 / 06 / 2013 Ngarava inoparara muArgentina: 3 yakafira muchitima chechitima muguta guru reArginine Buenos Aires, uye vamwe vatakakuvara vakakuvara kupfuura 100. 3 akafira mutsaona wechitima muguta guru reArgentina, Buenos Aires, uye kupfuura vanopfuura 100 vakakuvara. Vakuru, mumaawa ekumabvazuva muMoron munharaunda yepamugwagwa 2 chitima pakati pechiteshi che2 chakaziviswa kuti imwe chitima. Mushure mokunge njodzi yacho, vamwe vatasvi vematokari vachibva kuzvivako zvavo uye vakaudza vakuru vakuru vakadzidza. Vatasvi vakaputika mumupurisa vakaponeswa nemapoka ekutsvaga uye okudzikinura akatumirwa kunzvimbo. Ruben Sobrero, mutungamiri we Railroad Union, ndeye 6 yemadziro maviri emakwenzi emotokari
Dzidzira njodzi muArgentina, 3 yakafa yakafa ne100 15 / 06 / 2013 Dzidzisai ikatsva kuArgentina, 3 akafa xnumx'ler pamusoro vakakuvara nechitima tsaona vokuArgentina raMwari guru Buenos Aires, 100 vanhu vakaurayiwa, vanopfuura 3 mubhazi vakanga akashuma vakakuvara. Machinda 100 nyaya Republic chitima mangwanani maawa Moron yakazivisa kuti rikarova mumwe chitima akamira pakati zvechitima 2. Mushure mokunge njodzi yacho, vamwe vatasvi vematokari vachibva kuzvivako zvavo uye vakaudza vakuru vakuru vakadzidza. Vatasvi vakaputika mumupurisa vakaponeswa nemapoka ekutsvaga uye okudzikinura akatumirwa kunzvimbo. Railway Union mutungamiri Ruben Sobrero, nhurikidzwa mbiri Suburban nezvitima kuti kushandiswa kuri 2 mwedzi, akati mazuva mashoma apfuura kuti kutanga kudanana zvakare nokuda arambe achirema nguva. Front ...
6 yafa, 200 yakakuvara mukuputika muFrance muVideo) 13 / 07 / 2013 Dzidzisai ikatsva muFrance akafa 6, 200 vakuvara: Located kumaodzanyemba Paris, guta guru France pamusana ari derailment ane Republic chitima muna Essonne 6 vanhu vakarasikirwa noupenyu hwavo. Limoges kubva Paris apo iye akanyora chitima rwendo 370, 22 vanhu vakanga uyuwo xnumx wakanyorwa kuti rinorema. Paris Austerlitz chitima chinofamba chitima kubva chezvitima, iyo Teoz nhamba 60 dzekwavanogara. nguva, 3657 kubva: 17 kuitika pakati kwamira pamusoro Brétigny-sur-Orge chiteshi, pamwe chitima ngoro 14 7 ngoro derailed. 4 mutakurwi akawira kubva chikamu njanji ngoro dzakanga anoenda pachena kuti mukuru voltages. Vamwe motokari kuti akayambuka mugwagwa zvakafanana pachikuva muna 370 mamita dzakakwirira ...
Panzvimbo yekuparara kwechitima 1 yakafa, 2 yakakuvara 21 / 08 / 2013 Aydin akafa muna nechitima tsaona 1, 2 vakuvara: kuedza kuyambuka kuchiteshi zambuko uye yakarohwa pedyo chitima vanaamai nevana vavo. Amai nevana vakaedza kudarika vana vaviri pabhiriji rezvitima muJ Germencik district of Aydın. Amai wemwedzi mumwe chete, amai vakafira pamakumbo avo, amai nevamwe vanasikana vakakuvadzwa. Iyi njodzi yakaitika pazana ne4 yebhiriji rezvitima pamusoro penyika yeGermencik. Nazilli-Soke nguva imwe mufambi chitima, kutorwa kubva kuchiteshi zambuko kuedza kuyambuka Şükriye Duru (18.00) uye riri pedyo Edanur (30) uye 5-mwedzi yekare mwana yakarohwa Ecrin Duru. Pamusana pemigumisiro ye 4 yemwedzi weEcrin, iyo inofambisa bridge bridge ın
Minister Turhan, 'Nhasi Silk Road iri kuwana hutility'
Dzidzira njodzi muGermany: 3 yakafa, 13 yakakuvara
Dzidzira njodzi muArgentina, 3 yakafa vakafa 100 yakakuvara
Dzidzira njodzi muArgentina, 3 yakafa yakafa ne100
6 yafa, 200 yakakuvara mukuputika muFrance muVideo)
Panzvimbo yekuparara kwechitima 1 yakafa, 2 yakakuvara
Dzidzira kuparara muEgypt: 24 yakafa, 28 yakakuvara (Vhidhiyo)
Dzidzisa Kuputika muIgingin ruwa rweKony: 1 Vakafa, 1 Vakakuvadzwa (Vhidhiyo)
MuUnited States kuputika kwechitima 7 yakafa, 12 yakakuvara (Vhidhiyo)
MuIndia kuputika kwevashandi 11 vakafa vakakuvara 42
Pakistanda motokari yerima 13 yakafa, 150 yakakuvara